China abicah Foley ipayipi nge lokushisa Ucwaningo ifektri abakhiqizi | I-Kangyuan
• Yenziwe ngo-100% wezicucu zezinga lezokwelapha ezingenisiwe ezingenisiwe.
• Ibhaluni elithambile nelinomoya ofanayo lenza ishubhu lihlale kahle esinyeni.
• I-valve enekhodi yokuhlola enemibala yokuhlonza osayizi abahlukene.
• Kuyindlela engcono kakhulu ezigulini ezibucayi zepayipi eligciniwe ukukala izinga lokushisa kwemizimba yazo.
• Ukuzwa izinga lokushisa.
Ukupakisha: 10 PC / ibhokisi, 200 PC / ibhokisi
Usayizi webhokisi: 52x34x25 cm
Isetshenziselwa ukwenziwa kwe-catheterization ejwayelekile yomtholampilo noma i-urethral drainage yokuqapha okuqhubekayo kokushisa kwesisu seziguli ngesiqapha.
Lo mkhiqizo wakhiwa nge-urethral drainage catheter kanye ne-probe yokushisa. I-catheter ye-Urethral drainage iqukethe umzimba we-catheter, ibhaluni (isaka lamanzi), inhloko yomhlahlandlela (ithiphu), isikhombimsebenzisi se-lumenge lumen, ukugcwalisa isikhombimsebenzisi se-lumen, isikhombimsebenzisi sokulinganisa i-lumen interface, i-flushing lumen interface (noma cha), i-flushing lumen plug (noma cha) nomoya valve. Ithuluzi lokushisa liqukethe iprosesa lokushisa (i-chip eshisayo), i-plug interface kanye nokwakheka kwentambo. Ipayipi lezingane (8Fr, 10Fr) lingafaka ucingo oluyisiqondisi (uma uthanda). Umzimba we-catheter, ikhanda lomhlahlandlela (ithiphu), ibhaluni (isaka lamanzi) kanye ne-lumen interface ngayinye yenziwe nge-silicone; valve emoyeni senziwa polycarbonate, ABS plastic kanye polypropylene; ipulaki eshaywayo yenziwa nge-PVC ne-polypropylene; ucingo lwesiqondisi lwenziwe nge-PET plastic kanye ne-probe yokushisa kwenziwa nge-PVC, fiber kanye nezinto zensimbi.
Lo mkhiqizo ufakwe i-thermistor ezwa ukushisa okuyisisekelo kwesinye. Ububanzi bokulinganisa bungu-25 ℃ kuye ku-45 ℃, futhi ukunemba kungu- ± 0.2 ℃. Isikhathi sokulinganisa semizuzwana engu-150 kufanele sisetshenziswe ngaphambi kokulinganisa. Amandla, isixhumi sokuhlukanisa amandla, ukuthembeka kwebhaluni, ukumelana okugoqayo nokugeleza kwezinga lalo mkhiqizo kuzofinyelela izidingo ze-ISO20696: 2018 standard; ukuhlangabezana nezidingo zokuhambisana kwe-electromagnetic ze-IEC60601-1-2: 2004; ukuhlangabezana nezidingo zokuphepha kagesi ze-IEC60601-1: 2015. Lo mkhiqizo uyinyumba futhi awunanzalo yi-ethylene oxide. Inani eliyinsalela le-ethylene oxide kufanele libe ngaphansi kuka-10 μg / g.
Imibhalo / Imininingwane
Ikhodi yombala yokukhomba
Ukucaciswa kwesiFulentshi (Fr / Ch)
Igama eliqhamuka ngaphandle lepayipi le-catheter (mm)
i-lumen yesibili, i-lumen yesithathu
okuluhlaza okwesibhakabhaka okuphaphathekile
I-lumen yesibili, i-lumen yesithathu, ukuphuma kwe-lumen
1. Ukuthambisa: ipayipi kufanele ligcotshiswe ngothambisa wezokwelapha ngaphambi kokufakwa.
2. Ukufaka: faka ipayipi elithanjisiwe emthanjeni uye esinyeni ngokucophelela (umchamo uyakhishwa ngalesi sikhathi), bese ufaka u-3-6cm bese wenza ibhaluni lingene esinyeni ngokuphelele.
3. Amanzi afuthayo: Usebenzisa isirinji engenaliti, faka ibhaluni ngamanzi oyinyumba angahluziwe noma i-10% ye-glycerin solutionque ehlinzekwayo. Ivolumu enconyiwe ongayisebenzisa imakwe kufaneli ye-catheter.
4.Ukulinganisa ithempelesha: uma kunesidingo, xhuma ukuphela kwangaphandle kwesixhumi sesimo sokushisa nesokhethi yesibuko. Ukushisa kweziguli kungabhekwa ngesikhathi sangempela ngemininingwane ekhonjiswe ukuqapha.
5. Susa: Lapho ukhipha ipayipi, okokuqala hlukanisa i-interface yomugqa wokushisa kusuka kumonitha, faka isipontsho esingenalutho ngaphandle kwenaliti ku-valve, namanzi angenamsoco ebhaluni. Lapho umthamo wamanzi esirinji usondele kulowo womjovo, ipayipi lingakhishwa kancane, noma umzimba weshubhu unganqunywa ukuze kususwe ipayipi ngemuva kokudonsa ngokushesha.
6. Ukuhlala: Isikhathi sokuhlala sincike ezidingweni zomtholampilo nasezidingweni zobuhlengikazi, kepha isikhathi esiphezulu sokuhlala ngeke seqe izinsuku ezingama-28.
1. I-urethritis enamandla.
2. I-acute prostatitis.
3. Ukwehluleka kwe-intubation yokuphuka kwe-pelvic nokulimala kwe-urethral.
4. Iziguli zibhekwa njengezingalungile odokotela.
1. Lapho uthambisa ipayipi, ungasebenzisi i-lubricant equkethe uwoyela substrate. Isibonelo, ukusebenzisa uwoyela kaphalafini njengesithambisi kuzodala ukuqhuma kwebhaluni.
2. Osayizi abahlukahlukene bama-catheters kufanele bakhethwe ngokweminyaka ngaphambi kokusetshenziswa.
3. Ngaphambi kokusetshenziswa, hlola ukuthi ingabe ipayipi le-catheter limi kahle yini, ukuthi ibhaluni liyavuza yini noma cha, nokuthi ukuncela akuvinjelwe yini. Ngemuva kokuxhuma ipulagi lokuhlola lokushisa nesiqaphi, noma ngabe idatha ekhonjisiwe ayijwayelekile noma cha.
4. Sicela uhlole ngaphambi kokusetshenziswa. Uma noma yimuphi umkhiqizo owodwa (ogcwele) utholakala unezimo ezilandelayo, akuvunyelwe ukusebenzisa:
A) ngaphezu kosuku lokuphelelwa yisikhathi lokuvala inzalo;
B) iphakethe elilodwa lomkhiqizo lilimele noma linezindaba zangaphandle.
5. Abasebenzi bezokwelapha kufanele bathathe izinyathelo ezithambile ngesikhathi sokugubha noma sokuxubha, futhi banakekele kahle isiguli nganoma yisiphi isikhathi ngesikhathi sokufakwa kwe-catheterization ukuze kuvikelwe izingozi.
Inothi elikhethekile: lapho ithubhu lomchamo elihlala ngemuva kwezinsuku eziyi-14, ukuze kugwenywe ishubhu lingashibilika ngenxa yokwehla kwamandla omzimba oyinyumba ebhaluni, abasebenzi bezokwelapha bangafaka amanzi oyinyumba ebhaluni ngasikhathi sinye. Indlela yokusebenza imi kanjena: gcina ishubhu lomchamo lisesimweni esigciniwe, ukhiphe amanzi oyinyumba ngaphandle kwebhaluni ngesirinji, bese ufaka amanzi oyinyumba kubhaluni ngokusho kwamandla okuzisholo.
6. Faka ucingo lomhlahlandlela esikhwameni samanzi se-catheter sezingane njenge-intubation esizayo. Sicela udwebe ucingo lwesiqondisi ngemuva kokutholwa.
7. Lo mkhiqizo unenzalo nge-ethylene oxide futhi unesikhathi esivumelekile seminyaka emithathu kusukela osukwini lokukhiqizwa.
8. Lo mkhiqizo ulahlwa ukuze usetshenziswe emitholampilo, uqhutshwa ngabasebenzi bezokwelapha, futhi ubhujiswe ngemuva kokusetshenziswa.
9. Ngaphandle kokuqinisekisa, kuzogwenywa ukusetshenziswa kwinqubo yokuskena kohlelo lwe-nuclear magnetic resonance ukuvimbela ukuphazamiseka okungahle kuholele ekusebenzeni okungalingani kokushisa kokushisa.
10. Isikhathi sokuvuza sesiguli sizolinganiswa phakathi komhlaba kanye ne-thermistor ku-110% wenani eliphakeme kakhulu lamanani okuhlinzekwa kwenethiwekhi.
1. Kuyaphatheka ukuqapha kwamapharamitha amaningi (imodeli mec-1000) kulo mkhiqizo;
2.i / p: 100-240V-, 50 / 60Hz, 1.1-0.5A.
3. Lo mkhiqizo uhambisana nesistimu yokuqapha izinga lokushisa le-YSI400.
Amathiphu wokuhambisana kwe-Electromagnetic
Lo mkhiqizo kanye nemishini yokuqapha exhunywe kuzothatha izinyathelo ezithile zokuqapha maqondana nokuhambisana kwe-electromagnetic (EMC) futhi kuzofakwa futhi kusetshenziswe ngokuhambisana nemininingwane yokuhambisana ne-electromagnetic ebalulwe kulo myalelo.
Umkhiqizo kufanele usebenzise izintambo ezilandelayo ukuhlangabezana nezidingo zokukhishwa kwe-electromagnetic nokuphikisana nokuphazamiseka:
Ulayini wamandla （16A）
2. Ukusetshenziswa kwezesekeli, izinzwa nezintambo ezingaphandle kwebanga elicacisiwe kungakhuphula ukuphuma kwe-electromagnetic kwemishini kanye / noma kwehlise ukuvikeleka kwamandla kagesi kwensimbi.
3. Lo mkhiqizo nedivayisi yokuqapha exhunywe ayikwazi ukusetshenziswa eduze noma ukustakwa namanye amadivayisi. Uma kunesidingo, ukubhekelwa okuseduze nokuqinisekiswa kuzokwenziwa ukuqinisekisa ukusebenza kwayo okujwayelekile ekucushweni okusetshenzisiwe.
4. Lapho i-amplitude yesiginali yokufaka iphansi kunesilinganiso esiphansi esichazwe kuzincazelo zobuchwepheshe, isilinganiso kungenzeka singanembi.
5. Noma ngabe enye impahla ihambisana nezidingo zokuqalisa ze-CISPR, ingadala ukuphazamiseka kulo mshini.
6. Amadivayisi wokuxhumana aphathekayo nawamaselula azothinta ukusebenza kwedivayisi.
7. Amanye amadivayisi aqukethe ukungcola kwe-RF angaphazamisa ifoni (isb. Umakhalekhukhwini, i-PDA, ikhompyutha enokusebenza okungenantambo).
Langaphambilini I-Laryngeal Mask Airway yokusetshenziswa okukodwa
Olandelayo: 2 Way Silicone Foley Catheter eneTiemann Tip
ipayipi le-catheter lokushisa
ipayipi lokushisa elinenzwa yokushisa
ipayipi le-foley elinophenyo lokushisa
ipayipi le-foley elinenzwa yokushisa
ipayipi le-silicone elinophenyo lokushisa
ipayipi le-silicone elinenzwa yokushisa
ipayipi le-silicone foley elinophenyo lokushisa
ipayipi le-silicone foley ngenzwa yokushisa
ithempelesha ye-sensig silicone catheter
ipayipi lokushisa lokushisa
ithempelesha ibona ipayipi le-foley catheter
ithempelesha ezwa abicah foley catheter
ukushisa kokuzwa ipayipi le-urethral
lokushisa sensinh foley ipayipi
ipayipi le-urethral elinophenyo lokushisa
ipayipi le-urethral elinenzwa yokushisa
ipayipi lomchamo elinophenyo lokushisa
ipayipi le-urinary elinenzwa yokushisa
I-Suprapubic Silicone Foley Catheter
Abicah Urinary Foley ipayipi nge Temperatur ...